QODOBBADA WAXTARKA LEH EE PHYSALIS, SIDA DHIRTU U SAAMEEYSO JIDHKA BINI'AADAMKA - DAAWADA DADWEYNAHA
Kuwo badan ayaa maqlay dhaqanka noocan oo kale ah sida physalis. Sanduuqyo casaan ah oo aan caadi ahayn, foosto, taas oo miraha geedka ay qarinayaan - waxa ugu horreeya ee aad xasuusato. marka ay ka hadlaan Physalis, waxay ka tirsan tahay qoyska habeenkii. Warshadkan dilka ah wuxuu gaaraa ilaa 50-100 cm oo dherer ah, waxay soo saartaa ubax jilicsan oo ah kareem ama midab caddaan ah, kaas oo ka soo baxa axils of caleemaha iyo Bloom ee August. Midhaha guud ee midabka guduudan ama midab-badeedka wuxuu ku dhex jiraa koobabka xumbada. Sidaa awgeed magaca geedka: Giriigga "physio" micnaheedu waa cayayaan.
Khudradda miraha ee Sebtembar - Oktoobar. Caleemaha dhulka hoostiisa ah ayaa daaqsinka ku duulaya. Physalis waxay ku koreysaa dhoobada, geesaha kaynta, xiniinyaha ku dhow, ee kaymaha fudud. Waxay ku baahsan yihiin Bartamaha Aasiya, Caucasus, Dalalka Baltika, Ruushka, Ciraaq, iyo Bulgaariya. Si kastaba ha noqotee, miro kasta ma aha mid ku habboon cuntada iyo daaweynta. Sidaa daraadeed, waxaan sii baadhi doonnaa faahfaahin dheeraad ah oo ah nooca dhakhtarka iyo sida loo cuno.
Ma taqaanaa? Physalis weliwaxaa lagu magacaabaa marionka, cherry pepey, xajmiga.
Halabuurka Physalis, waa maxay warshadda bogsiinta
Aqoon u leh physalis, ogaansho waxa ay tahay, bal aynu aragno waxa uu yahay geedka soo jiidasho leh, marka lagu daro quruxdiisa dibadeed? Qiimaha waa midhaha, taas oo 10% ka kooban tahay walxaha qalalan, oo ay ku jiraan abuurka. 15% dadka dambe waxay yihiin walxo saliid leh. Intaa ka sokow, 2.5% miro ayaa ah borotiinno, 4.5% - sonkor, 0.7-1.4% acids organic (malic, tartaric, succinic, citric), 0.45% pectin iyo walxaha kale ee gelling 0, 1% carotene, 45-100g oo ka mid ah ascorbic acid, iyo waliba wax soo saarka aan macquul ahayn, macdanta, maskaxda.
The berry waxaa ku jira qaybaha raadka sida:
zinc, oo ah qayb ka mid ah unugyada unugyada jirka;
sodium, oo kaalin weyn ka ciyaara dheef-shiidka biyaha;
kalsiyum, mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee nudaha lafaha;
birta, oo ku lug leh dhiig-samaynta;
magnesium, kaas oo bixiya dhammaan hababka dheef-shiid kiimikaad;
Fosfooraska, kaas oo hubiya habka caadiga ah ee nidaamka dareemayaasha, waxay sameeyaan qalfoofka, waxay qayb ka qaataan dheef-shiid kiimikaad;
potassium, kaas oo hubiya sida caadiga ah ee nidaamka wadnaha iyo xididdada.
Roots waxaa ku jira noocyo kala duwan oo alkaloids ah. Caleemaha waxay ku faani karaan jiritaanka steroids, iyo sidoo kale carotenoids (lutein esters, beta-carotene, alpha-carotene, iwm.). Waxa kale oo ku jira astaamaha karboksilic iyo flavonoids.
Waa muhiim! Inta badan ee lagu xusay Physalis, dadku waxay u maleynayaan sanduuqyo jilicsan oo isku-dhejis ah, gudaha taas oo ah miro yar yar. Laakiin tani waa kaliya "Fourche" - nooca ugu caansan ee qurxinta Physalis, oo leh dhadhan qadhaadh ah oo aan ku habbooneyn isticmaalka aadanaha. Tan waxaa ku jira noocyo qudaar ah iyo berry kala duwan ee dhaqanka. Berry laga soo dhirta khudradda way ka duwan tahay macaan, laakiin waxaa loo isticmaalaa sida dhirta daawada.
Qalabka dawooyinka ee Physalis, marka la isticmaalo midhaha
Haatan waxaynu ogaannaa waxa ay isticmaalaan Physalis. Asal ahaan waxaa loogu talagalay ujeedooyinka daaweynta: daaweynta mareenka kaadi-mareenka, nidaamka neefsiga, laabotooyinka, herpes, turqaha iyo cudurrada kale. Waxaa lagu qiimeeyaa xaaladdeeda xanuunka, antiseptic, hemostatic, choleretic, guryaha lagu durayo.
Sida daaweynta, xididdada iyo miraha geedka waxaa loo isticmaalaa. Waa la gooyaa oo la qalajiyaa xilliga dayrta, laakiin midhaha ayaa badanaa loo isticmaalaa cayriin. Si arrintan loo sameeyo, waa in marka hore ay ku dhajiyaan biyo karkaraya si ay u noqoto mid dhajis ah oo la mid ah. Miraha waxay leeyihiin dhadhan macaan iyo dhanaan leh qadhaadh yar. Waxaa lagu daraa maraqa, khudradda qasacadaysan, salad. Sidaa awgeed, marka la waydiiyo haddii takhtarkaaga la cuni karo hilib ceeriin ah, jawaabtu waxay ku jirtaa mid u qalma. Isticmaal sidoo kale diyaarinta koorsooyinka labaad, rash. Miraha cusub ayaa lagu jajabiyaa casiirka, macmacaan la kariyey, la qalajiyey oo la qalajiyey.
Sidee loo yaqaan 'physalis' loogu talagalay ragga?
Geedka waxaa lagu qiimeeyaa saameyn gaar ah oo ku leh jirka lab ah. Sidaa darteed, sanooyin ka badan, noocyadan dadweynaha waxay kordhiyaan khatarta muuqaalka cudurada kaadimareenka. Physalis waxay leedahay maadooyin faa'iido leh oo ah dabeecad ka hortag iyo dabiiciga, kuwaas oo leh saameyn aad u fiican oo ragga ah. Faa'iidada geedka ayaa ah in ay si toos ah u lahayn wax iska hor imaad ah, waxaana badanaa loo isticmaali karaa cunto ahaan.
Macaashka jireed ee jirka dumarka
Warshadu waxay leedahay saameyn wanaagsan oo wanaagsan oo ku saabsan jirka haweenka. Tusaale ahaan, decoction ee xididdadiisa waxaa lagu talinayaa isticmaalka xadgudubyada wareegga caadada. Tan iyo markii uurjiifku laftiisa uu leeyahay durayo, daawada antiseptic iyo anti-inflammatory, waxaa lagu talinayaa daawaynta caabuqa xubnaha taranka haweenka, iyo sidoo kale cystitis, pyelonephritis, urolithiasis. In la ogaado dhakhtarka ayaa u wanaagsan caafimaadka, waxaa loo isticmaali karaa wakhti kasta, maadaama uu yahay kalooriye yar iyo qudaar ama cunto yar. By habka, cadar ba'an ku salaysan waxaa loo isticmaalaa sida bogsiinta wakiil dibadda.
Isticmaalka Physalis ee daawada dhaqameed, cuntada ugu fiican
Noocyada faa'iido leh ee Physalis ayaa muddo dheer loo yaqaan. Avicenna ayaa sidoo kale ku taliyay isticmaalka daaweynta boogaha iyo neefta. Ma aha wax la yaab leh, cuntada caanka ah ee loogu talagalay isticmaalka dhirta ee daaweynta ayaa ka badbaaday ilaa maanta.
Ma taqaanaa? Halyeeygii Physalis wuxuu sheegay in markii qorraxdu ay liqday masduul weyn. Duniduna waxay ku murmacday gudcur, wax walbana way u dhinteen. Laakiin waxaa jiray nin dhallinyaro ah oo geesinimo leh oo soo qaadey iftiinka, dabadeedna wuxuu raadinayay xayawaanka. Markuu arkay masduulaagii wuu laayay isagii, oo wuxuu qorraxdii soo baxsaday; Waxay ku faaftaa iftiin dhalaalaya, oo haddana indhahana way indho tirtay nin dhallinyaro ah. Wuxuu si deg deg ah indhaha ugu qariyay gacmihiisa oo farta ka soo tuuray. Wuxuu dhulka ku dhuftey oo wuxuu u rogay guluubka yar ee foornada. Laga soo bilaabo iyaga physalis ayaa koray adduunka oo dhan.
Dhiig yari iyo dhiig-karka
Shamiliyiinta Aasiya ayaa ogaa sifooyinka wanaagsan ee dhakhtarka waxayna isticmaaleen warshadda si loogu daaweeyo dhiig-karka, dhiig-yaraanta, iyo caloosha. In labaad ee kiisaska, midhaha cusub ee warshadda siinayaa saameyn aad u fiican. Waxaa lagu talinayaa in ay isticmaalaan 2-3 jeer maalintii kahor cuntooyinka 5-10 gogo '. Dhiirrigelintu waxay daawaysaa shaah ku salaysan daboolka miraha iyo caleemaha geedka.
Maraq cudurada caloosha
Decoction ah ee midhaha Physalis, sida macnaheedu yahay in la dagaallamo cudurada gastric waxaa loo isticmaalaa inta badan ee Bulgaria. Waxay ku daaweeyeen decoction ma aha oo kaliya calool xanuunka caloosha, laakiin sidoo kale hemorrhages, cagaarshow, turqada, laabotooyinka, cholecystitis. Waxay si fiican u caawineysaa daaweynta cudurka neerfayaasha iyo sida duriinka.
Si aad u diyaarisid maraq, qaado nus galab oo biyo ah si aad u qaadato 20 g miro cusub ama la qalajiyey oo isku kari ilaa 10-15 daqiiqo. Markaas maraq wuxuu ku adkaysanayaa ilaa uu qaboobo. Cadaadiska, qaado rubuc koobi 4-5 jeer maalintii.
Maanta, miraha waxaa lagula talinayaa daaweynta boogaha duodada iyo caloosha, xanuunka hypoacid, sonkorowga mellitus, cholessstitiska dabadheeraad ah. Miraha yaryar ee yar yar waxaa lagu qaadaa qiyaas ahaan 10-15 gogo ', kuwa waaweyn - 4-8.
Waa muhiim! Haddii aad leedahay kiimiko sare, heerka isticmaalka miraha cusub waa in la jaraa. Waa in la cunaa isla markiiba cuntada ka hor, mar kasta oo waxoogaa kordhisa qiyaasta. Markasta xoogga saar fayadaada. Qadarka ugu badan ee la ogolaan karo ee 8-15 gogo ', iyadoo ku xiran cabbirka miro.
Casiirka la karkariyey angina iyo stomatitis
Ujeeddooyinkan, Physalis waxaa loo isticmaalaa gudaha Soomaaliya, kaas oo daawada laguu qoray daaweynta. Waxaa lagu talinayaa in lagu qasi karo miraha Physalis mushqaayad ama tuujin cabitaanka iyaga. Karkari isku dar ah isku dhafka kulaylka yar oo leh caano dheeraad ah. Kadibna daaweynta la kariyey waxay bixisaa 3-4 Art. qaaddo 3-4 jeer maalintii 4-5 maalmood. Inta lagu jiro waqtigan, stomatitis, xayawaanka iyo laryngitis ayaa si buuxda loo daaweynayaa. Haddii aad waqti gooni ah u qaadato, waad iska ilaalin kartaa cudurka.
Miyuu qalalan karaa miro yar?
Cuntada qalalan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa cuntada. Waxaad cuni kartaa labadii miro ee la qalajiyey labadaba, iyo dib u habeyn iyaga. Waxay sidoo kale leeyihiin waxyaabo faa'iido leh, oo lagu daaweeyo cudurrada infakshanka kala duwan ee mareenka sare ee neefta, oo ay ku jiraan hargabka, boronkiitada, iyo hargabka caadiga ah.
Ma jiraan wax isir ah?
Dad badan ayaa ka welwelsan su'aasha ah in ay jiraan waxyaabo ka hortag ah isticmaalka Physalis. Dhaqan ahaan, laguma talinayo haweenka uurka leh iyo hooyooyinka kalkaaliyaha ah. Dhirta dhirta jidhka, marka lagu daro waxtarkeeda, waxay sidoo kale keeni kartaa dhaawac jirka ah oo leh dadka qaba sunta sare. Waxay u isticmaali karaan berry dhowr jeer mar, iyagoo si tartiib ah u kordhinaya lambarkooda.
Tan iyo qeybaha dhul-gariirka ee geedka waxaa ku jira feselin iyo alkaloids, ka hor inta aan la isticmaalin geedka, waa lagama maarmaan in la tasho dhakhtar.
Inta kale Physalis - warshad waxtar leh. Ma aha oo kaliya qurxinta beertaada ama beerta khudradda, laakiin sidoo kale waxay leedahay saameyn togan oo ku saabsan jirka. Waxaa muhiim ah in aanad isticmaalin noocyo kala duwan oo lagu qurxiyo dhaqanka.